OnePlus sonyere akara ngosi ya na njedebe ya ọzọ, OnePlus 6 | Gam akporosis
Ọ bụrụ na ị sooro anyị ụbọchị ndị a na mkpuchi pụrụ iche nke anyị mere nke MWC, ị ga-enwe ike ịhụ ole ka ụlọ ọrụ ndị maliterela ịkụ nzọ na itinye usoro ahụ kụrụ ahịa ekwentị dị mkpa, ọ bụ ezie na Apple na iPhone X.
Leagoo, ASUS, Huawei ... bụ ụfọdụ n'ime ihe atụ kachasị doo anya na ahịa na-ewu ewu mgbe ọ bịara ịnakwere ọkwa obi ụtọ kama ịkụ nzọ na sistemụ ndị ọzọ. echiche nke Vivo APEX nyere ya na igwefoto zoro ezo na elu elu ma ọ bụ belata okpokolo agba na nke kachasị, dị ka Samsung, ka ị ghara iji ụdị ihuenyo mee ụdị dị iche.
Ọnwa ole na ole gara aga, e hiwere OnePlus 5T, ọnụahịa nwere ọnwa ole na ole fọdụrụ iji hụ otu onye nọchiri ya, OnePlus 6 (ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-akpọ ya n'ikpeazụ) rutere n'ahịa ahụ. Na ụlọ ọrụ ebe asịrị na ntapu juru ebe niile, ihe oyiyi mbụ nke onye nọchiri OnePlus 5T Ha abanyelarịrị na nwute na anyị nwere ike ịhụ ka ụlọ ọrụ Eshia na-ahọrọ i copyomi ọkwa ahụ site na iPhone X, dị ka ọtụtụ ndị nrụpụta ndị ọzọ, kama ịnye atụmatụ mbụ.
Ọzọkwa, egosiri na ọtụtụ ụlọ ọrụ karịa ogologo oge gara aga ha chụrụ ngalaba R&D niile n'ọrụ, ọ bụrụ na ha enwee ya. Na Apple amalitela ọnụ ya na nkuanya ya n'elu ihuenyo ahụ iji belata akụkụ ihuenyo ahụ, ọ pụtaghị na ọ dị mma ma ọ bụ na onye ọ bụla nwere ike ịmasị ya, mana ọzọ ọ na-egosi na ọtụtụ ndị nrụpụta nwere Apple na ntọala. dị ka a ga - asị na ọ bụ ụlọ ọrụ na - agbaso, n'agbanyeghị ihe ọ na - eme, maka mma ma ọ bụ njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » OnePlus sonyere na notch ejiji na ya ọzọ ọnụ, na OnePlus 6